Mugabe - World - Mugabe - World - Care2 News Network
- 3542 days ago - avaaz.org
Act Now! BAN ZIMBABWE BLOOD DIAMONDS [Avaaz Petition]
World (tags: world, Zimbabwe, Mugabe, humanrights, children, 'blood' diamonds )
Zimbabwe's Robert Mugabe has sent his brutal army to seize control of his country's diamond fields. 200 civilians have been murdered and profits from our wedding rings are used to fuel violent political conflict.[thanks, Dandelion]
World (tags: Mugabe, killing, Zimbabwe, diamonds, diamond fields, violence, world, crime, africa, corruption, death )
- 3677 days ago - cbc.ca
Sign Petition: Zimbabwe Needs Your Help!
World (tags: Human rights, violence, Zimbabwe, Mugabe, Refugees&Relief, africa, United Nations )
- 4039 days ago - thepetitionsite.com
As President Robert Mugabe asserts his power and stifles opposition, citizens are sexually abused, tortured, intimidated, and murdered. Help bring peace, stability and justice to Zimbabwe by signing this Care2 petition.
World (tags: mugabe )
HARARE, Zimbabwe - President Robert Mugabe accused the Zimbabwe opposition of lying about political violence to justify claims that next week's presidential runoff vote will not be free and fair, the official media reported Saturday.
World (tags: Zimbabwe, Mugabe, stolen election )
he and his ruling ZANU-PF party declared that the MDC has committed treason - meaning in Mugabespeak, that it is now ineligible to hold political office and is, for all intents and purposes, now outlawed by the gangster regime in Harare.
World (tags: Zimbabwe, Mugabe )
The US ambassador to Zimbabwe on Thursday said opposition supporters had been murdered, abducted and forced from their homes in a spate of violence in rural areas since last month's elections.
Southern African Leaders Press Zimbabwe - New York Times
World (tags: Zimbabwe, Mugabe, secret vote counting )
After a marathon session to address Zimbabwe's political impasse, southern Africa's political leaders on Sunday urged the government of President Robert Mugabe to permit representatives of the opposition to be present when vote tabulations are verified
Militants Invade White Farms in Zimbabwe
- 4120 days ago - rawstory.com
New Signs of Mugabe Crackdown in Zimbabwe - New York Times
Zimbabwe's government staged separate police raids on Thursday against the main opposition party, foreign journalists and at least one democracy advocate, raising the specter of a broad crackdown aimed at keeping the country's imperiled leaders in power.
World (tags: Zimbabwe, Mugabe, election fraud )
- 4126 days ago - ca.reuters.com
Riot police appeared on the streets of Zimbabwe's capital after a long delay to election results fuelled opposition suspicions that President Robert Mugabe may try and cling to power by rigging the vote.
World (tags: Zimbabwe, Mugabe, election rigging )
producers of the nation's banknotes, also showed 600,000 postal ballot papers were requisitioned for a few thousand soldiers, police and civil servants away from their home districts and for diplomats and their families abroad, he said.
Most Active Stories Today in World tagged with Mugabe